Lego Star Wars Millenium Falcon အွန်လိုင်းမှပြန်လည်မှာယူမှု
Lego Star Wars UCS Millennium Falcon သည် LEGO.com သို့ပြန်လည်မှာယူသည်
02 / 10 / 2021 02 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 381 Views စာ 1 မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, 75192 UCS ထောင်စုနှစ် Falcon, ပြန်လာမှာ, နောက်ကြောင်းပြန်, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars။ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, Lego စတော့ရှယ်ယာ, Lego စတော့ရှယ်ယာအဆင့်အတန်း, ထောင်စုနှစ် Falcon, ထောင်စုနှစ် Falon, Star Wars, UCS, UCS 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, UCS ထောင်စုနှစ် Falcon
ဒီလကအခုမှစတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် Lego Star Wars 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနေသည်။
ကြီးကြီးမားမားကို ၀ ယ်ဖို့ဘယ်သူမဆိုမျှော်လင့်ပါတယ် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon ယင်းနှင့် တွဲဖက်. အောက်တိုဘာလအပေးအယူ လက်ရှိနေထိုင်သည် US မှာ အစုံမှာယခုအော်ဒါမှာနေပြီဖြစ်သောကြောင့်လအနည်းငယ်ကြာသည်အထိ၎င်းကိုရလိမ့်မည်မဟုတ်။
မော်ဒယ်အတွက်ယာယီစတော့ရှားပါးလာသည် စက်တင်ဘာလထဲမှာအပိုင်း ၇၅၄၁ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်မတိုင်ခင်အထိမည်သည့်အော်ဒါများနှင့်မဆိုပို့ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းဤရက်စွဲသည်အချိန်နှင့်အမျှပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်သည်။
အထင်ကရကုန်တင်ကုန်ချသည်ကြီးမားသောဖန်တီးမှုတွင်သစ္စာရှိစွာဖမ်းယူထားပြီး၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာသုံးလကို မူတည်၍ သင်္ဘောခေတ်နှစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုရန် minifigures များပါ ၀ င်သည်။ တည်ဆောက်မှုတိုင်း၏လက်မတိုင်းသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးယနေ့တိုင်၎င်းသည်အကြီးမြတ်ဆုံးတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေသည် Lego ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ် ဦး စလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျယ်ပြန့်သောအစုစု၌အစုံ In-depth ပြန်လည်သုံးသပ် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်ဆုံး 20 စာရင်း.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆုတ်ခွါခြင်း ဤပုံစံ၏ရွှေ့ဆိုင်းပုံရသည်ထို့ကြောင့်အနာဂတ်၌ချက်ချင်းလက်ငင်းရရန်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်နောက်ကျသောပို့ဆောင်ရေးရက်နှင့်ပျော်ရွှင်ပါကအော်ဒါများပြုလုပ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်တစ် ဦး အတွက်£ 649.99 / $ 799.99 / € 799.99 ကိုသိမ်းချင်ပေမည် နှစ်ဆ VIP အမှတ်ပွဲစဉ်များ နောက်ပိုင်းလများတွင်သင်စုစုပေါင်းအမှတ် ၁၀,၄၀၀ ရလိမ့်မည်။
← နေ့၏အုတ်ပုံ: Amalienborg
LEGO, Netflix (နှင့် Bryan Cranston) သည် Jerry Seinfeld ကိုကျဆင်းစေသည် →
တစ်ခုမှာ "Lego Star Wars UCS Millennium Falcon သည် LEGO.com သို့ပြန်လည်မှာယူသည်"
04/10/2021 at 20:08
ငါအမေရိကန်မှာနေတယ်၊ ​​Lego ကနေအရှေ့ပိုင်း ၁၂ နာရီ ၂၂ မိနစ်မှာအီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာတစ်ခုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ ငါညနေ ၃ နာရီ EST မှာငါစစ်ဆေးခဲ့တာအခုခဏတာတော့ပစ္စည်းပြတ်သွားပြီ။